Nomery sy dikany isa | fandinihana ny - Hevitry Ny Tandindona
Nomery sy dikany isa
hitady ny nomeraonao isa eto ambany ary tsindrio ny sary na ny lohateny hamakiana rehetra momba ny dikany masina sy ara-panahy amin'ny làlan'ny fiainanao, ny anjaranao, ny mifanentana ary ny laharam-pahamehanao! Raha tsy azonao antoka na tsy fantatrao ny isanao , ampiasao ny Calculator isa hahalala mora foana! Tsindrio ihany koa na tsindrio raha te hahalala bebe kokoa momba izany Fanisana ho toy ny fitaovana fanaovana sikidy .
Numerology Calculator Ny angona be dia be momba ny fandraisana isa sy fampiasana ireo isa ireo mba haminavinana momba ny ho avy. Ny ...
Nomeraolo 1 - Làlan'ny fiainana laharana 1, fampifanarahana ary lahatra
Nomeraolo 1: Làlan'ny fiainana laharana 1, ny fampifanarahana ary ny dikany Destiny Om, ny fofon'aina voalohany an'izao rehetra izao. Izaho no ...
Nomeraolo 2 - Làlan'ny fiainana laharana 2, ny fampifanarahana ary ny dikan'ny lahatra
Nomeraolo 2: Ny làlan'ny fiainana laharana 2, ny fampifanarahana ary ny dikan'ny lahatra amin'ny fahazazana masina. Reny Masina. Energies Yin ireo ...
Nomeraolo 3 - Làlan'ny fiainana laharana 3, ny fampifanarahana ary ny dikan'ny lahatra
Nomeraolo 3: Làlan'ny fiainana laharana faha-3, ny fampifanarahana ary ny dikan'ny lahatra. Ny synthesis, ny taranaky ny 1 & 2, ny laharana 3 ...
Nomeraolo 4 - Làlan'ny fiainana laharana 4, ny fampifanarahana ary ny dikan'ny lahatra
Nomeraolo 4: Làlan'ny fiainana laharana faha-4, ny fampifanarahana ary ny dikan'ny lahatra amin'ny lafiny efatra mitovy habe dia misy ...
Nomeraolo 5 - Làlan'ny fiainana laharana 5, ny fampifanarahana ary ny dikan'ny lahatra
Nomeraolo 5: Ny làlan'ny fiainana 5, ny fampifanarahana ary ny dikan'ny lahatra faha-5 Ny tontolontsika anaty sy ivelany dia mifamatotra amin'ny seta ...
Nomery 6 - Làlan'ny fiainana laharana 6, ny fampifanarahana ary ny dikan'ny lahatra
Nomery 6: Làlan'ny fiainana laharana faha-6, ny fampifanarahana ary ny heviny amin'ny faniriana Gaia, mpitaiza faratampony, mpanome fitiavana tsy misy fetrany. Izy, ...
Nomera 7 - Lalana fiainana 7, fampifanarahana ary dikan'ny lahatra
Nomery 7: Làlan'ny fiainana laharana faha-7, ny fampifanarahana ary ny dikan'ny lahatra. Ilay manonofinofy. Ilay olona tia tanindrazana taloha. Ny saina ...
Nomeraolo 8 - Làlan'ny fiainana laharana 8, ny fampifanarahana ary ny dikan'ny lahatra
Nomeraolo 8: Làlan'ny fiainana laharana faha-8, ny fampifanarahana ary ny dikan'ny lahatra Karma, mijinja izay nafafy, fiheverana ny fahefana, fahombiazana ara-bola; ...
Nomeraolo 9 - Làlan'ny fiainana laharana 9, ny fampifanarahana ary ny dikan'ny lahatra
Nomeraolo 9: Ny làlan'ny fiainana, ny fampifanarahana ary ny dikan'ny laharana faha-9 Amin'ny dikan'ny isa, ny 9 dia mandray ny farany ao amin'ny ...
Nomeraolo 11 - Làlan'ny fiainana laharana faha-11, fahazoana mifanentana ary hevitry ny lahatra
Nomery 11: Ny làlan'ny fiainana ny Master Number 11, ny mifanentana ary ny dikan'ny lahatra amin'ny lafiny ara-panahy an'ny isa dia 11 no raisina ...
Nomeraolo 22 - Làlan'ny fiainana laharana faha-22, fahazoana mifanaraka, ary ny dikan'ny lahatra
Nomeraolo 22: làlan'ny fiainana, fahaiza-mampifanaraka, ary ny dikan'ny laharana faha-22 an'ny Master numerumer dia mamaritra ny 22 ho Master Builder an'ny mystical ...
Inona ny numerolojia
Manomboka amin'ny fotoana ianarantsika hiresaka dia lasa ampahany amin'ny zava-misy iainantsika isan'andro ny isa, mipoitra tampoka eo amin'ny fiainana. Manana daty nahaterahana ianao, isa fiarovana ara-tsosialy, nomeraon-trano, haben'ny kiraro ary fandrefesana satroka. Mitohy hatrany ny lisitra.
Ny fahamaroan'ny isa fotsiny dia manome antsika fahatsapana ny maha-zava-dehibe azy ireo tsy eo amin'ny lafiny ara-panahy ihany fa amin'ny lafiny ara-panahy ihany koa. Ny mpahita taloha sy ny Lightworkers maoderina dia samy mahatsapa hovitrovitra manokana amin'ny isa, karazana fiteny aritmetika izay mampiditra marika, famantarana, fambara ary lamina hafa eo amin'izao rehetra izao.
Ka tohizo ny fihomehezana!
Ny fitsipika ao ambadiky ny Numerology dia ny zava-drehetra eto amin'ity izao tontolo izao ity misy karazana rantsantanana mahery vaika - ao anatin'izany ianao! Nandritra ny tantara dia nanasokajy ireo dian-tànana ireo ny filozofa sy mpampianatra ary torolàlana mba hahafahantsika manomboka mandray tsara ireo fikirakirana izay manome antsika famantarana ny dikan'ny fiainana sy ny anjara asantsika mpandeha ara-panahy.
Miaraka amin'ny isa manokana, ny eritreritra dia ny fotoana nahaterahanao dia miteraka fahafaha-manao sy fetra voafaritra, rafitry ny toetra. Raha vantany vao fantatrao ny drafitra mainty sy fotsy, dia mbola afaka miloko ivelan'izy ireo ianao, fa ny tsipika no fiandohana amin'ny fanatsarana ny zava-drehetra amin'ny fiainanao ao anatin'izany ny asa aman-draharaha sy ny fifandraisana.
Eto, makà crayons vitsivitsy dia andao hijery akaiky kokoa.
Ny Numerologist mahay iray dia tsy hilaza aminao mihitsy fa ny andro nahaterahanao dia mamaritra anao tanteraka (heck, ajanontsika daholo ny fahanteran'ny taona 25 marina?).
Na dia mampiasa ny fomba Pythagorean nentim-paharazana ny tandindona sy ny dikany aza ny ankamaroan'ny olona any amin'ny tany tandrefana dia misy fomba hafa tsy manaraka an'i Pythagoras '(na dia efa naheno momba ilay bandy aza izy ireo).
Noho izany dia tsy maintsy avelantsika hanana efitrano iray mampihetsi-po amin'ny fampisehoana ireo tandindona ireo sy ny finoana momba ny fiantraikan'izany eo amin'ny fiainantsika.
Ahoana ny fomba fiasa Numerology?
Ny fototry ny Numerology dia tsy be pitsiny loatra.
Ny litera tsirairay amin'ny anaranao nomenao dia manana isa mifanaraka amin'izany.
Amin'ny fampidirana ireo isa ireo amin'ny fomba samihafa (ny anaranao feno, zanatsoratra fotsiny, renisoratra fotsiny na ireo isa amin'ny daty nahaterahanao manontolo) dia miafara amin'ny mombamomba ireo toetranao ianao.
Ny sasany amin'ireo tandindona dia mihantsy anao, misy manohana sy manamora - fa ny REHETRA dia miankina amin'ny fomba fampiharana ny vaovao.
Ny olona sasany dia lasa lavitra nanova ny anarany ara-dalàna hanova ny hovitrovitra amin'ny fananganana Numerolojika. Raha mieritreritra an'izany ianao dia tadidio ilay teny taloha momba ny fitandremana izay tadiavinao. Mba hanaovana fanovana lehibe toy izany dia tsy tsotra toy ny fanovana ny 'I' ho lasa 'E' (afa-tsy aorian'ny C). Tokony (a) hahafantatra izay tadiavinao ianao ary (b) miomana hiasa ho azy.
Raha tsy misy zava-mahatalanjona mitranga amin'ny zava-misy misy anao izay manohana ny fanovana isa, dia mety tsy ho maitso miaraka amin'ny anarana vaovao mihitsy ny ahitra.
Alohan'ny handehanantsika misimisy kokoa amin'ny fandinihanay dia mety hahaliana anao ny hahafantatra fa Numerology dia nampiasaina tamin'ny sehatra mahagaga sasany. Ny broker sasany dia mampiasa azy amin'ny faminavinana ny tsenambola. Ny sasany kosa mampiasa numerolojia ara-Baiboly mba hananana fanambinana. Nampiasa nomerao efatra ny mpanakanto Prince tamin'ny fanondroana ny rakikirany ary na tamin'ny fomba nanakarany ny tapakila fitsidihana aza.
Lehilahy sa vehivavy ny isa amin'ny isa?
Amin'ny alàlan'ny fananganana azy ireo, ny isa dia maneho ny filaharana. Ny iray amin'ireo didin'ny fiainana dia ny lahy sy ny vavy - izany hoe lahy sy vavy. Heverina fa ny isa hafahafa dia masculine ary na ny isa aza dia manana toetra mampiavaka ny vehivavy.
Aza adino, ianao misy manjavozavo eto ka diniho ity ho fandinihana tena ankapobeny ary iray izay tsy mijery afa-tsy ny velaran'ny fampahalalana nomen'ny Numerology.
Ahoana ny fomba hahitana ny isa nomeraoninao (làlan'ny fiainana, ny lahatra, ny fampifanarahana, ny fanahy ary ny asa aman-draharaha)
Na dia misy gadget neato sy gizmos marobe aza amin'ny Internet izay heverina ho ' Calculator Numerology 'tsy ampiasainay izy ireo satria mifototra amin'ny algorithme izay tsy tafiditra tamin'ny fanaovana azy ireo ary midika izany fa tsy afaka manamarina ny fahamarinany izahay.
Ankoatr'izay, ireo fantatsika momba azy dia be zotom-po ary mino izahay rehefa miasa ny olona iray amin'ny fananganana ny fanahin'izy ireo tsara tarehy dia tokony isaina ny miavaka.
Rehefa tena nanomboka nandavaka lalina an'ity zavatra Numerology ity izahay dia nivadika tamin'ny fomba haingana sy mora ny manampy isa masina anao. Raha manao izany ianao, rehefa mamaky momba ny dikan'ireo tarehimarika ireo dia ny sary an'ohatra sy ny hafatra ara-panahy no mety.
Mandany ara-bakiteny toy ny minitra vitsy monja izany dia vakio ny torolalantsika tsotra ary lasa anao manokana Calculator isa !
Ao amin'ity Rafthagorean System of Numerology (izay ampiasainay) ity, ny anaranao sy ny daty nahaterahanao dia maneho ny 'Be-ing' anao, ary ny manam-pahaizana amin'ity sehatra ity dia mamaky bebe kokoa ity fampahalalana fototra ity ho sokajy manokana:
Isan'ny lalan'ny fiainana :
Mahatsapa ny mpandinika nomerao fa tena ilaina io isa io. Miorina amin'ny daty nahaterahanao io isa io, anisan'izany ny taona. Manakoako miaraka amin'ny iraka karma anao mandritra izao fiainana izao.
Lahatra na anjara:
Io no isa misy ifandraisany amin'ny tanjona, talenta ary fahasalamana ara-batana / ara-pihetseham-po. Mahazo an'io isa io ianao amin'ny fanomezana isa ny litera tsirairay amin'ny anaranao manontolo.
Soul Urge na Heart's Desire Isa:
Ity isa ity dia manome topy maso ny fanirianao miafina sy ny antony manosika anao. Raiso io sanda io amin'ny fampidirana ireo isa mifandraika amin'ireo zanatsoratra ihany amin'ny anaranao.
Isan'ny toetra manokana :
Ity isa ity no asehonao an'izao tontolo izao ary azo izy amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo consonants isaky ny faritra amin'ny anaranao, mampihena ireo faritra ireo amin'ny isa tokana, manampy ireo roa na telo miaraka indray, ary mampihena indray.
Isa mifanentana :
Ity isa ity dia ny fampitahana ireo Nomera làlan'ny fiainana ho an'ny mpiara-miasa mba hahitanao ny fahombiazan'ny fifandraisana sy ny vato misakana.
Isan'ny asa :
Amin'ny alàlan'ny fampiasana sombim-baovao avy amin'ny sokajy rehetra ao amin'ny Numerology, ny olona iray dia afaka mahazo hevitra tsara momba ny asa sahaza azy indrindra sy ny fahitana ny momba ny fifanarahana fanahy.
sagittarius lehilahy capricorn vehivavy eo am-pandriana
Tantara momba ny isa
Ny numerology dia manana tantara lava any amin'ny toerana lavitra toa an'i Egypt, Israel, India ary Greece raha tsy hilaza afa-tsy vitsivitsy. Ny filozofa iray antsoina hoe St. Augustine (354-430 am.fi) dia nilaza taminay fa ny isa dia fiteny iraisan'Andriamanitra. Izy sy Pythagoras dia nitovy. Samy nitady hampifandray isa ny tsy ny sain'ny olombelona ihany fa ny fifandraisan'ny zavatra rehetra.
Tsy asa kely!
Ireo mpanohana ny laharana dia niseho isaky ny vanim-potoana, fa tany antenatenan'ireo taona 1800 no nanomboka nahita lafiny sosialy kokoa izahay. Akin amin'ny fomba nitomboan'ny Language of Flowers ho rafitra fifampiresahana mangina eo amin'ireo mpitia, mety ho hitanao ny olona miresaka dite sy cookies momba ny fahitana ny tena fitiavana amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo isa avy amin'ny anarany na daty nahaterahany. Ny isa manan-danja amin'ireo ezaka masina ireo dia 1-10, fa nisy koa isa mavesatra - 11, 22 ary 33 (ireo izay hita ao amin'ny I Ching, ny Tarot, Runes ary ny Kabbalah).
maneho inona ny lilia calla?
vehivavy pisces sy leo lehilahy ara-nofo
vehivavy scorpio sy pisces lehilahy eo am-pandriana
scorpio vehivavy sy lehilahy mifanaraka amin'ny homamiadana